वर्डप्रेस Jetpack छोटो चौड़ाई | Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 29, 2013 शनिबार, अक्टोबर 24, 2015 Douglas Karr
जब WordPress जारी गरियो jetpack प्लगइन, तिनीहरूले औसत वर्डप्रेस स्थापना खोले केही महान सुविधाहरू जुन तिनीहरूले आफ्नो होस्ट गरिएको समाधानमा समावेश गर्दछ। एकचोटि तपाईंले प्लगइन सक्षम गर्नुभयो भने, तपाईं सहित एक सुविधाहरूको टोन सक्षम गर्नुहोस् छोटा कोडहरू। पूर्वनिर्धारितद्वारा, WordPress ले तपाईंको औसत लेखकलाई पोष्ट वा पृष्ठको सामग्री भित्र मिडिया स्क्रिप्टि add थप्न अनुमति दिँदैन। यो एक सुरक्षा सुविधा हो र तपाईंको साइट गडबडी गर्ने सम्भावनाहरूलाई कम गर्नका लागि हो।
यद्यपि सर्टकडको साथ तपाईको प्रयोगकर्ताले मिडिया इम्बेड गर्न सजिलो हुन्छ उदाहरण को लागी, एक यूट्यूब भिडियो इम्बेड गर्न, एम्बेड स्क्रिप्ट थप्न आवश्यक छैन - तपाईले साझा URL लाई पाठ सम्पादकमा भिडियोमा राख्नु भयो। सर्टकडहरूको एकीकरणले मार्ग पहिचान गर्दछ र URL लाई वास्तविक भिडियो कोडको साथ बदल्छ। कुनै गडबड छैन, कुनै मुद्दा छैन!
एक बाहेक सर्टकडहरू प्रयोग गरेर तपाईको इम्बेडेड मिडियाको चौडाइ केवल पूर्वनिर्धारित हुन्छ। त्यसोभए यूट्यूबले तपाईंको सामग्रीको चौडाई भन्दा बाहिर विस्तार गर्न सक्दछ र तपाईंको साइडबारमा छर्कन्छ - वा स्लाइडसेयरले लिन सक्ने आधा ठाउँ लिन सक्दछ। मैले प्रत्येक विशिष्ट सर्टकटको चौडाइलाई पूर्वनिर्धारित गर्नका लागि केहि फिल्टरहरू कसरी लेख्ने भनेर चिन्न प्रयास गर्दै केही घण्टा खर्च गरे। त्यहाँ पहिले नै बाहिर छ कि छैन भनेर हेर्न मैले एक टन प्लगइनहरू पूर्वावलोकन गरें।
र मैले यो फेला पारे ... एक शानदार थोरै परिमार्जन जुन WordPress ले उनीहरूको एपीआईमा थपे। एक सेटिंग जहाँ तपाइँ तपाइँको पृष्ठहरू र पोष्टहरूमा सामग्रीको चौडाई पूर्वनिर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ:
यदि (! आईसेट ($ सामग्री_विड्थ)) $ सामग्री_विड्थ = 600;
मैले यो विषयवस्तुको फंक्शन.पीपीपी फाइलमा यो चौडाई सेट गर्ने बित्तिकै सबै इम्बेडेड सर्टकट मिडिया राम्रोसँग पुनःआकार गरियो। जबकि म खुसी छु कि यसले कोडको एक लाइन मात्र लिएको छ, म एक ठूलो फ्रेज्लेड हुँ कि यो पाउन यो धेरै समय लाग्यो। अझ रमाईलो पनि संग अनुकूलन को अभाव संग उपलब्ध छ jetpack। सर्टकडहरू, उदाहरण को लागी, असक्षम गर्न सकिदैन - यो सक्षम छ जबसम्म प्लगइन सक्षम छ।
यो उत्कृष्ट हुन्थ्यो, उदाहरणका लागि, अधिकतम थप्न चौडाई र उचाई सेटिंग सीधा मा jetpack सर्टकट सेटिंग्स। WordPress यति अविश्वसनीय प्लेटफर्म हो, तर कहिलेकाँही समाधान पत्ता लगाउन अलिक निराशाजनक हुन सक्छ!
टैग: उचाइjetpackछोटा कोडहरूस्लाइडशेयर चौड़ाईvimeo चौड़ाईचौडाइWordPressयूट्यूब चौड़ाई
तपाईंको वर्डप्रेस साइटलाई केहि फ्लेर दिनुहोस्